अण्डा अहिलेसम्म कै महँगो, कति पुग्यो बजार भाउ ? « Salleri Khabar
अण्डा अहिलेसम्म कै महँगो, कति पुग्यो बजार भाउ ?
२१ बैशाख, काठमाडाैँ । अण्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । रोगका कारण कुखुरा मरेर उत्पादन घटेपछि मूल्य बढेको हो । लागत मूल्य अत्यधिक बढेका कारण मूल्य बढे पनि उल्लेख्य मुनाफा नहुने कृषकको भनाइ छ ।